Enyela ndị ọzọ ikike imebi ụbọchị gị. - Amaghi ama - Quedia Pedia
Ndụ dị oke ọnụ ahịa. Ndi mmadu no na ndu anyi bu ndi puru iche mana n’iru mmepe mmekorita, anyi ekwesighi ichefu onwe anyi. Anyị kwesịrị ịnabata mkpa na ụkpụrụ anyị oge niile.
Daybọchị ọ bụla na ndụ ga-enwerịrị ebumnuche ma anyị kwesịrị ịchịkwa ihe anyị chọrọ. Ọ naghị ekwe omume mgbe nile ịkọ ihe ga-abịa, mana anyị kwesịrị ịgbalị ịdị ndụ na usoro nke aka anyị n'ụzọ kachasị mma.
Anyị kwesịrị inwe atụmatụ doro anya n'uche gbasara etu anyị ga-esi chọọ ka ndụ anyị gaa n'ihu n'ime obere oge. Dịka na mgbe anyị hụrụ mgbanwe na-abata, anyị ga-emegharị ya ma gaa n'ihu. N'ezie, ọ dị mfe ikwu karịa ime ya mana anyị kwesịrị ịgbalị ike anyị niile ịnagide ndụ na mgbanwe ya.
N'ịchụso mmegharị na ịga n'ihu, anyị niile na-etolite gburugburu nke ndị anyị tụkwasịrị obi. Ma enwere ike oge ụfọdụ ụfọdụ na-akari ike nke na ha nwere ike ịbụ site na gburugburu anyị n’onwe ya.
Yabụ, ibido n’etiti ha gaa na onye ọ bụla ọzọ na-apụ apụ bụ ndị chere na ha nwere ikike itinye aka, ị kwesịrị izere ụdị ndị ahụ niile. Mgbe ụfọdụ, anyị na-ahụ onwe anyị n'anya nke ukwuu na mmadụ n'anya nke na anyị anaghị ejide onwe anyị. Anyị na-ahapụ ka ha merie anyị, jiri obi ha niile chọọ.
Nke a bụ ebe ekwesiri ijizi aka ma kpachara anya na anyị agaghị enye onye ọzọ aka dị elu na ndụ anyị nke ukwuu ka ha wee mebie anyị otu ụbọchị. Ọ bụrụ na anyị nwere ike ịmụta ụzọ isi ebi ndụ a Anyị nwere ike ịchịkwa ndụ anyị.
Emela ihe iwe
Ntughari uche nke Ubochi
Ndị mmadụ na-ekwu
Echiche Ziri Ezi Maka ụbọchị
Ebugharị Maka Taa
Otu ndi mmadu kwuru banyere ndu gi
Chere Maka Kwuru Okwu Taa
The mbụ achị na ndụ: Ọ bụrụ na ị na mgbe na-aga mgbe ihe ị chọrọ, ị ga-enwe ya. - Amaonye
Iwu mbu na ndu: O buru na i ghaghi ime ihe ichoro, ighaghi enwe ya. -…
Ị bụ ihe bara uru na irreplaceable. Ọ bụrụ na agwara gị n'ụzọ ọzọ, ekwenyela. - Amaghi ama
Are bara uru na enweghị ike ịgbanwe. Ọ bụrụ na agwara gị n'ụzọ ọzọ, ekwenyela. - Amaghi ama…